यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्, बन्नसक्नुहुन्छ कंगाल ! - Mitho Khabar
April 20, 2022 mithokhabarLeaveaComment on यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्, बन्नसक्नुहुन्छ कंगाल !
दान दिनु आफैंमा उत्तम कार्य हो । शास्त्रले पनि दान दिनु पुण्यको काम हो भनेको छ । दान दिँदा के दिने के, नदिने यसबारे भने जान्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी साथीभाई या कोहि आफन्तले तपाईको हातमा लगाइराखेको घडी एकछिन वा एकदुई दिन मागेमा दिने काम नगर्नुहोला। अर्को कुरा अरुको हातको घडी पनि तपाईले नबाध्नु होला ।यस्तै उपहार या दानमा पनि घडी दिनु राम्रो होइन । धेरैको बानी हुन्छ उपहारमा घडी दिने । अझ विदेशबाट आउनेले त प्रायजसो घडी नै उपहारमा दिने गर्छन् । तर त्यसो गर्नु नराम्रो हुने चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
शास्त्रका अनुसार धन सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । धनकै कारण कति आ परा धिक घटना घट्ने गरेको समाचार बेलाबेला आइरहन्छ। अझ आफन्तसँग त झन् पैसाको लेनदेन गर्नै हुँदैन । धनकै कारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ।हामीले कसैलाई दान गर्दा पैसाको सट्टा अरुनै चिज दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सापटीमा पनि सकभर पैसा नदिएकै राम्रो हुने वा नलिएकै राम्रो । किनभने पैसा सापटी लिएकै दिन त्यो मान्छेको नजरमा तपाई गिर्नुहुन्छ या लिने मान्छे गिर्छ।
गोली लागेर प्रहरी हवल्दारको मृत्यु